Xiaomi Gateway 3 - Xiaomi Smart HomeKit - famerenana ny Hub farany - SmartMe
Xiaomi Gateway 3 - famerenana ny Hub vaovao indrindra avy amin'ny Xiaomi
23 Janoary 2020
hubara aqara, mi hub 3, xiaomi, vavahadin'ny xiaomi 3
Niandry ela aho. Voalohany aloha mandra-pando azy ireo avy eo, rehefa afaka mividy ary nony farany dia ho tonga eo am-baravarako izany. Mila fantatro raha hamaha ny olako rehetra izy! Inona no ho an'ny vavahadin-tsolika Xiaomi 3. Ianaro izany avy amin'ny famerenana eto ambany izay anolorantsika ny fandidiana, ny fiasa ary ny fanombanana ity fitaovana ity ho an'ny trano manan-tsaina.
Ny fanantenana ho an'ny Xiaomi Gateway 3 Home Kit dia avo dia avo. Nahatonga fijery lehibe momba ireo fitaovana fampiroboroboana izy. Fandraisana mampifandray fitaovana 64, Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, Mesh. Ny vavahady dia mampiasa ny protocols de komunikasi rehetra, tsy mila ampidirintsika mivantana any amin'ny sokosy (ka tsy mipetaka amin'ny rindrina io). Fa angano fotsiny.
Fihetseham-po voalohany amin'ny Xiaomi Gateway 3
Ny fonosana sy famoahana ny vavahady dia avo indrindra amin'ny kalitao. Ny boaty dia eritreretinao tsara ihany, kely eo amin'ny fomba Apple. Ny kaody HomeKit dia napetraka amin'ny toerana mety, ary alefa daholo ny tariby rehetra ho an'ny fitaovana lozisialy matanjaka Xiaomi. Mahafinaritra! Ny vavahady koa dia tsara tarehy sy minimalistic tanteraka. Sambo kely sy fotsy kely misy jiro tokana eo alohany. Miampy tariby usb micro (maninona no tsy USB-C ?!) ary plug iray. Mijery tsara ny zava-drehetra.
Mora kokoa amin'io vavahady io satria tsy mila ampidirinao mivantana ao anatin'ny sokitra ianao. Azonao atao ny mampifandray tariby iray ary apetraho eo amin'ny talantalana, ohatra. Toa mampientam-bidy kokoa noho Aqara Hub izy io. Azontsika apetraka moramora eo akaikin'ny Apple TV na boaty napetraka ambony ary ho tsara tarehy izany ho toy ny ivon-fanaraha-maso ho an'ny trano mahay.
Tsy tao mihitsy io fehintsoratra io satria tsy nilaina mihitsy. Na izany aza, noteren'ny Xiaomi Gateway 3 ho anay izany. Izany dia satria ny fifandraisana voalohany dia niafara tamin'ny tsy fahombiazana tanteraka. Ny hub dia miasa amin'ny fitsipika ampidirinay fitaovana "zaza" ao aminy, toy ny sensor. Ka raha nanana tanjona taloha ianao, toa an'i Aqara Hub, dia mila esorinao hiala any izy ireo ary ampidiro amin'ny tanjonao. Feo tsotra sa tsy izany? Mampalahelo fa amin'ny fampiharana, Xiaomi Gateway dia tsy kivy mora foana.
Ny olana voalohany aorian'ny fampidirana vavahady ho an'ny fampiharana, raha manana izany amin'ny fiteny poloney ianao, dia ny mamantatra izay momba azy. Manana fiasa be dia be izy io ary amin'ny teny sinoa daholo. Tondra-drano ara-bakiteny ny takelaka ary vinavina ny zava-mitranga. Rehefa afaka kelikely anefa, dia mahita ny safidy ianao hanampiana fitaovana iray ary hampifangaro azy. Eo no manomboka ny olana. Tamin'ny fotoana voalohany dia naharitra adiny 2 aho vao nampiditra ny sensor sy ny varavarankely mahazatra! Ny sensor dia tapaka tsy tapaka avy teo am-bavahady, tokony ho iray metatra miala azy ...
Rehefa afaka kelikely, na izany aza, ny sensor dia nanampy soa aman-tsara ary azo ampiana amin'ny iray amin'ireo maody efatra. Tsy azoko hoe inona ny momba azy ireo (hajia sinoa), noho izany dia nofatoriko ilay voalohany. Nahomby izany, na dia tsy fantatro aza hoe. Nanomboka nanampy sensor sensor bebe kokoa aho. Voalohany ny voalohany, avy eo ny faharoa. Tamin'io fotoana io dia nanjavona ilay voalohany. Ka nampidiriko ny voalohany sy ny fahatelo indray. Nanjavona ilay faharoa sy ilay sensor teo am-baravarankely ... Rehefa afaka kelikely, tsy nisy nety tamiko, ary nampiseho lesoka ilay fampiharana ... Famantarana izany fa tonga ny fotoana hatoriana ary hanome azy fotoana ho an'ny andro manaraka. Ny tranoko manan-tsaina dia tsy maintsy niandry fotoana fohy - ny fanohanan'ny fampiharana dia nivadika mihoatra ny heriko.
Fomba faharoa ho an'ny Xiaomi Smart Home Kit
Ny andro faharoa dia nanatona ny Xiaomi Gateway 3 aho niaraka tamin'ny angovo madio miaraka amin'ny tanjona mazava. Tamin'ity indray mitoraka ity dia afaka manampy ny sensor rehetra aho! Na izany aza, nisy zavatra nanohina ahy ary nanapa-kevitra aho fa hiezaka hanova ilay fiteny amin'ny fiteny anglisy. Vokatr'izany dia nahafantatra ny famaritana ireo fiasa manokana azoko soritana aminao amin'ny fehintsoratra manaraka ianao. Niampy daholo ny tsikera rehetra ary tsy nisy olana ary nanomboka nanomboka nihinana ny zava-drehetra. Tsy haiko hoe ahoana no fomba fiovan'ny fiteny, saingy mety izany. Ka afaka nanamboatra tsindrona ho an'ny mari-pana, ny hetsika na ny fisokafan'ny varavarana aza.
fampiharana Kitety Xiaomi Smart Home
Aorian'ny fanovana ny fiteny fampiharana amin'ny teny anglisy, dia misy ny fandikan-tenan'ny isam-batan'olona, ​​ary maro amin'izy ireo. Amin'ny voalohany dia misy fomba fanairana efatra:
Basic - ny fampiharana dia miasa tsy mijanona ary mampifandray izany ireo sensor izay mahita loza tsy misy fahatapahana. Amin'ny maha-sensor an'ny marani-tsaina azy avy amin'ny Xiaomi, ohatra, misy ny mpijery rano na mpanara-maso setroka.
Ao an-trano - ireo sensor izay hiteraka fanairana rehefa ao an-trano isika. Ohatra ny efitrano mihidy? Nanana olana kely tamin'ny fahazoana an'io fomba io aho.
Lavitry (lavitra ny trano) - ireo sensor izay miteraka fanairana rehefa lavitra ny trano ianao. Ireo dia mety ho sensor amin'ny fanokafana varavarana sy varavarankely (switch reed) na sensor sensor.
Torimaso (mandritra ny torimaso) - ireo sensor izay mety hanaitra fanairana rehefa matory isika. Izy ireo koa dia mety ho sensor amin'ny fanokafana varavarana sy varavarankely (switch reed) na sensor sensor.
Sarotra be ny fizarana ary io no olan'ny fampiasana ampiasaina hampiasaina ilay fitaovana. Ilaintsika ny manampy sela ilaina amin'ny isaky ny fanairana fanairana, ankoatr'izay dia afaka mifehy ny be dia be isika ary mitarika ny tsirairay amin'izy ireo. Tao amin'ny Aqara Hub dia niasa mandeha ho azy, tsy mila manetsika zavatra aho. Ho ahy dia mihoatra ny endriny mihoatra ny votoatiny.
Misy safidy roa hafa eto ambanin'ny fanairana. Vatan-kazo, andiana hetsika izay nateraka ary nanampy fitaovana "ankizy".
Amin'ny ampahany amin'ny fametrahana vavahady azontsika atao, anelanelan'ny hafa apetraho safidy ho an'ny maoderina fiasan'ny tsirairay sy fanamafisam-pahefana miaraka amin'ny HomeKit. Ankoatra ireo safidy roa ireo, tsy misy zavatra hafa ankoatry ny safidy Xiaomi.
Ny safidy farany dia ny vavahady bluetooth. Azontsika atao ny mampifandray ireo fitaovana bluetooth amin'ny vavahady ary hifehy azy ireo lavitra. Tena manampy be izany.
HomeKit sy Xiaomi Gateway 3
Ny vavahady fahatelo an'ny taranaka dia manana fanohanana ny HomeKit, toy ny teo aloha ihany. Ny mety ho gaga anao amin'ny voalohany dia ny tsy fisian'ny vavahady eo amin'ireo fitaovana hita eo amin'ny drafitry ny tranonay. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny Xiaomi Gateway 3 sy Aqara Hub: ny voalohany dia ny vavahady, ary ny faharoa dia fanairana miaraka amin'ny fiasan'ny vavahady. Ny HomeKit dia mahita an'i Aqara Hub ho fanairana ary noho izany dia afaka mametraka an'izany fomba izany isika. Xiaomi Gateway 3 dia ho an'ny HomeKit vavahady tsy hita. Mba hahitana azy dia tsy maintsy mandeha any amin'ny efitranon'ny tranontsika isika any.
Mora ny fitaovana fampitaovana amin'ny HomeKit. Ny olana tokana dia ny tsy fahampian'ny sensor manondraka. Na dia nanampy ahy imbetsaka aza izy ireo dia tsy miseho ao amin'ny HomeKit. Ireo sensor hafa rehetra dia azo jerena. Ny tena mahasorena ahy dia ny tsy fahafahanao mamadika ny fanairana. Tsy maintsy miditra amin'ny Mi Home aho isaky ny mandeha.
Misaotra an'i Maciej, efa manana fomba fiasa izahay amin'ny fampidirana miaraka amin'ny mpanampy an-trano! Na izany aza, io fitaovana io dia miasa ho an'ny iOS ihany, satria tsy maintsy mampiasa HomeKit izahay.
Ampidiro fotsiny ny kaody HomeKit, izay ho hitanao eo ambanin'ny vavahady sy ao anaty boaty. Ireo sensor rehetra izay nampidirin'ny HomeKit teo aloha dia ho hita ao amin'ny HA ihany koa. Tsy mihatra amin'ny fitaovana "ankizy" fotsiny izany. Tsy ho hita amin'ity fomba ity ireo fitaovana nampidirina tamin'ny alàlan'ny vavahady BLE.
Xiaomi Gateway 3 isan'andro
Ahoana ny fiasan'ny vavahady rehefa afaka andro vitsivitsy niasana? Manana ny tsara sy ny fahaizany. Manana ny fahatsapana aho fa rehefa mifandray amin'ny stabilite fifandraisana dia tsara kokoa noho Aqara. Nitranga tamiko niaraka tamin'i Aqar fa nisy fitaovana sasany nilatsaka noho ny fifandraisana. Miaraka amin'i Xiaomi Gateway 3 tsy misy izany. Mampalahelo fa ity ihany no iray lehibe hafa hitako raha ny amin'ity tanjona ity.
Malahelo be aho noho ny tsy fahaizako manomboka ny fanairana manomboka amin'ny fampiharana Apple Dom. Efa zatra an-taonany maro izy io ka tsy eo. Vokatr'izany dia tsy maintsy miditra ao amin'ny rindranasa Mi Home aho ary mihodina miala amin'io ambaratonga io. Tsy tiako ny hoe ny HomeKit dia tsy manana mpitoraka rano. Toe-javatra hafahafa ho ahy ity.
Ny faharavàna farany amin'ny tanjona dia ny fanairana. Ny vavahady kosa dia toa ny asany no jerena, fa raha tsy nisy fahombiazan'ny mpandahateny. Izany no antony nanomananay manokana tutorial ny fomba hiatrehana azy.
Mi Hub V3 - ny fomba fiadiana amin'ny Aqara Hub
Mi Hub V3 no vavahady farany avy any Xiaomi. Betsaka ny fiasa vaovao raha oharina amin'ireo teo alohany na ny vavahady Aqara. Anisan'izany Vavahady BLE na vokatra marobe kokoa (64 raha ampitahaina amin'ny ...
Miala tsiny fa hiverina eo amin'ny Aqara Hub aho. Mafana ny vavahady Xiaomi, saingy misy zavatra vitsivitsy manelingelina ahy. Namboarina io serivisy fampiasa io, ary malaiko ny fiasa lehibe ao amin'ny Apple House. Angamba miaraka amin'ny dikan-teny manaraka i Xiaomi dia hiverina amin'ny fomba voaporofo sasany, ary mandritra izany fotoana izany dia miandry ny haben'ny Aqara M2 isika.
Raha te hividy Xiaomi Gateway 3 ianao dia afaka manao azy io amin'ny fipihana ity rohy.
Ny fitaovana Xiaomi eo amin'ny tsena poloney tamin'ny 2020
Rehefa mandinika ny Xiaomi Gateway 3 sy miresaka momba ny kitapo Home, dia mendrika ny hiresaka momba ny lohahevitra tokana ao an-tsaina. Inona ny fitaovana vita amin'ny mpanamboatra sinoa izay misy eo amin'ny tsena poloney izao? Inona ireo fitaovana tokony homena sy didy? Ireo no fanontaniana hiarahantsika hitohy amin'ny fanohizan'ity lahatsoratra ity.
Mandra-pahatongan'ny andro farany, ny fitaovana Xiaomi dia nandeha tany amin'ny tsena poloney tamin'ny alàlan'ny AliExpress na ireo mpivarotra vitsivitsy manafatra fitaovana avy any ivelany. Tamin'ny taona 2020, dia efa taloha io - ny faran'ny mpanjifa dia nitombo tokoa, ankoatra ny fisokafan'ny fivarotana ofisialy an-tserasera sy ny efitrano fampisehoana. Ny telefaona Xiaomi dia azo soratana, ary noho izany dia nahazo laza bebe kokoa ny marika. Na ny mpamokatra malaza indrindra aza dia tsy maintsy nahatsapa fa hiseho eo amin'ny tsena poloney ny fifaninanana vaovao, izay marihin'ny velaran-tany midadasika sy tombony tena lehibe amin'ny endrika mari-pankasitrahana mendrika.
Ny marika Xiaomi dia mamela ny fitaovana an-trano mora kokoa. Ny saina an-tsokosoko sy ny telefaona tsy fantatra fantatra navoaka tamin'ny famoriam-bary Mi, Redmi sy Pocophone dia nankafizin'ny olona nandritra ny taona maro. Raha mazàna tetika ara-bola ny variants mora vidy, ireo modely farany dia am-pitoniana miaraka amin'ireo marika efa ekena kokoa, na dia amin'ny fakantsary na ny fahaizany aza. Ilaina ihany koa ny fitaovana finday iray hampandehanana ny kitapom-batsy mahay.
Ny mpanamboatra shinoa dia matetika voatonona matetika amin'ny zava-misy amin'ny vokatra hafa, toy ny fahitalavitra Mi LED amin'ny vidiny mahaliana. Ireo mpanjifa dia mahazo tolo-kevitra toy ny laptop 13,3 "laptop, headphone tsy misy tariby sy mpandahateny, gimbals, projectors na fakan-tsary amin'ny fanatanjahan-tena.
Ny teny manan-danja amin'ny teny manodidina ny famelabelarana ny praiminisitra Xiaomi manaraka amin'ny tsena poloney dia tokony ho ilay teny hoe "fomba fiaina". Ny kitapo, kitapo, valizy na solomaso dia manokatra lisitra lava misy vokatra izay mahasoa eo amin'ny fiainana an-trano, na koa ny fitsangatsanganana na ny asa. Ohatra? Izy ireo dia azo ovaina mandritra ny fotoana maharitra: fitaovana, fanoratana fitaovana, sivana rano, fanadiovana volo, paompy tànana, fitrandrahana herinaratra, tariby sy adaptatera, tsatoka-tena, vatan-tena fanatanjahantena, kettle. Ary ny mieritreritra fa betsaka ny safidy eo amin'ny tsenan'ny sinoa, satria ny filozofian'i Xiaomi dia manamafy ny fitomboan'ny ampahany amin'ny tsena maro.
Izany no fomba ataonay faribolana, manomboka amin'ny fandinihana ny Xiaomi Smart Gateway ary miverina amin'ny resaka Smart Home Kit. Ny fitaovana manan-tsaina izay manangona fotoana na mampitombo ny filaminana dia misy:
varavarana misokatra varavarana
sy ny maro hafa. Ny fanitsiana ny foibe sensor dia manokatra ny mety ho fifehezana ny trano manan-tsaina amin'ny fampiharana. Tsara ny manampy fa ny marika shinoa dia manolotra singa mandrehitra, mpanadio vaky, fiara mandeha amin'ny herinaratra, lakozia sy trano fandroana, router sy maro hafa, fitaovana hafa izay hifaneraseranao ho toy ny rafi-trano tokana tokana, tantanany sy automatique. Ampahafantaro ahy ao anaty fanehoan-kevitra izany raha liana amin'ny fitaovana Xiaomi hafa ianao ary manomana famerenana iray hafa izahay!